Vaovao - Inona no mitranga amin'ny smartwatches raha mikasika rano be izy ireo?
Inona no mitranga amin'ny smartwatches raha mikasika rano be izy ireo?
Inona ny famaritana ny famantaranandro marani-tsaina miaraka amin'ny fampisehoana tantera-drano? Azo atao ve ny mijanona maharitra amin'ny rano?
Raha ny marina, ny kilasy vokatra elektronika tsy misy vovoka sy tantera-drano dia asehon'ny IP matetika. Raha ny fizotran'ny teknolojia tsy misy rano sy ny famokarana, ny vokatra Hengmei Technology dia mety hahatratra ny haavon'ny IP67 sy IP68 tsy misy rano. Aorian'ny fitsapana ny ozinina dia mampiseho fahombiazana tsy tantera-drano amin'ny tontolo manokana ny vokatra, izay afaka miaro tena amin'ny fandrobohana fohy.
Inona no atao hoe Waterproof IPXX
IP68 no ambaratonga avo indrindra amin'ny fenitra tsy misy vovoka sy tantera-drano. Ahoana ny fanombanana ny fahombiazan'ny akorandriaka sy ny tantera-drano, indrindra hahitana IPXX aorian'ny tarehimarika XX.
Ny X voalohany dia ny haavon'ny vovoka, manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 6, ary ny haavon'ny avo indrindra dia 6.
Ny X faharoa dia isa tsy misy rano, manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 8, ary ny isa avo indrindra dia 8.
IPX1 rano latsaka ao an-trano tsy misy vokany
IPX2 tsy misy vokany rehefa mihodina hatramin'ny 15 degre ny trano
IPX3 rano na orana nilatsaka avy 60 degre tsy misy vokany
IPX4 ranoka na aiza na aiza lalana mankany amin'ny akorany dia tsy misy vokany
IPX5 afaka manasa rano tsy misy maninona
IPX6 azo ampiasaina ao anaty tranony, tontolo onja lehibe
IPX7 afaka mijanona anaty rano hatramin'ny iray metatra ny halaliny hatramin'ny 30 minitra
IPX8 afaka mijanona anaty rano hatramin'ny 2 metatra hatramin'ny 30 minitra
Ity dia vokatra avy amin'ny orinasanay, anaran'ny vokatra: H68. Taorian'ny fitsapana nataon'ny injenieranay sy ny mpanera anay, ny fampiasana ny famantaranandro dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny rendrika anaty rano indray alina. Fahaizana tantera-drano amin'ny lever.
Maninona no tsy atolotra ho an'ny orana mafana
Raha ny fandroana dia mila mandro mafana na mandro mangatsiaka ianao.
Amin'ny ankapobeny, sarotra ho an'ny vokatra elektronika misy fiasan-drano ny miditra ao anaty rano rehefa avy mandro mangatsiaka. Na izany aza, noho ny hafanam-po mahery vaika ny molekiola etona ao anaty fandroana mafana, ny etona rano ateraky ny fandroana mafana, ny sauna ary ny lohataona mafana dia mora miditra ao amin'ny faritry ny fehin-tànana, izay hiteraka ny fiasan'ny fehin-tànana tsy afaka ampiasaina amin'ny tranga matotra.
Ny porofon-drano sy ny etona dia foto-kevitra roa samy hafa.
Ny fitaovan'ny jeneraly dia tsy afaka miaro ny etona rano, toy ny famantaranandro amin'ny famonoana rano tsy metaly mandritra ny 30 metatra amin'ny fandroana mafana izay mbola mety misy etona. Ilaina ihany koa ny mitandrina ny filomanosana, raha ny fisitrihana sy ny fiasa hafa dia mbola mety hitranga amin'ny rano, ary raha milomano any an-dranomasina, noho ny rano an-dranomasina manimba dia mora ny manimba ny fifandraisana amin'ny famandrihana, ny famehezana peratra vita amin'ny fingotra ary ny fahanterana haingana hafa, ary ny fiasan'ny fitaovana tsy tantera-drano tsy maharitra, dia mety hihamalemy rehefa mandeha ny fotoana. Na toy inona na toy inona rano ny fehin-tànana marani-tsaina dia tsy tokony ampiasaina ela be any anaty rano izy io. Ny bracelet marani-tsaina dia vokatra elektronika manan-tsaina foana. Na firy na firy ny haavon'ny rano amin'ny bracelet marani-tsaina, raha ampiasainao anaty rano lalandava io dia hisy rano kely tsy nahy. Noho izany, ny fanasana tanana isan'andro, ny fandroana mangatsiaka, ny orana, ny hatsembohana dia azo anaovana, tsy soso-kevitra ny hisasa fandroana mafana na hifandray amin'ny rano mandritra ny fotoana lava, mba hanitarana ny androm-piainan'ny vokatra azo entina marani-tsaina. Ho fanampin'izany, latsaka ny fitaovana, mibontsina na mijaly hafa, mifandray amin'ny rano savony, gel mandro, detergent, ranomanitra, menaka fanosotra, menaka koa hisy fiantraikany amin'ny fanoherana ny rano amin'ny fehin-tànana.